🎰I-Casino ekhawulezayo ye-FastPay-Indawo yokuNgena ngokusemthethweni, ukuBhalisa ngo-2021
Ukukhawuleza kwiCasino yeKhasino
Ukwahluka koomatshini ekufakwa
Ubhaliso kwikhasino elikhawulezayo
Umsebenzi wekhasino okhawulezayo kwi-Intanethi njengeqonga lamanye amazwe apho izigidi zabadlali ezivela kwihlabathi liphela zinokubeka ukubheja kwazo. Eyona nto iphambili kwinkampani ibonakala kwigama. Abangcakazi banamhlanje abaqhelanga kulinda, kwaye ke bakhetha xa iimali zifike ngexesha kwikhadi lebhanki okanye kwisipaji sombane. Yiyo kanye le nto eyenziwa yiFastPay-Casino.
Iwebhusayithi esemthethweni yaqaliswa phakathi ku-2018. Ukusukela ngoko, inkampani ithathe indawo yayo kwindawo yokungcakaza. Ngapha koko, ikhasino ebonisiweyo yenye yeeprojekthi ezincedisayo zeSoftSwiss. Njengokufana noogxa abaninzi, yafumana iphepha-mvume kwisiqithi seCuracao.
Ngaphandle kobukho bamacandelo ahlukeneyo, ezona zithandwa kakhulu ngoomatshini ekufakwa. Iinkqubo zenkampani ziye zacinga indlela efanelekileyo yokuhluza iindawo ezenziwa ngumenzi. Phezulu kwiphepha eliphambili lewebhusayithi esemthethweni ye-Fastpay, kukho uluhlu lwazo, apho umdlali angakhetha khona ukhetho olungcono.
Imveliso nganye yomdlalo ineendlela ezimbini zomdlalo- ngemali yokwenyani, okanye idemo, apho kungafuneki ukuba uchithe imali oyisebenzele nzima. Le ndlela yamva ichaphazelekile kubaqalayo nakwabo bangcakazayo abaqala nje ukujikeleza ii-reels. Kubo, lithuba lokwenza izicwangciso kunye nokuqonda ialgorithm yesakhiwo esithile.
Ngenxa yendlela efanelekileyo ekukhetheni ababoneleli boomatshini bokufaka, i-Fastpay inesakhono sokongeza intuthuko kwisiza ngenqanaba eliphezulu lembuyekezo, ekumgangatho we-93-97%. Oku kuphakamisa ukuba ukusebenzisa iindawo ezinjalo, umthengi ufumana ithuba elihle lokwenza inzuzo kude.
Indawo iqulethe bobabini abameli bemveliso yongcakazo kunye neevidiyo ezikhoyo. Uninzi lwazo luqukethe imidlalo yebhonasi kunye nomngcipheko ekuvumela ukuba uphinde uzuze.
I-kasino ekhawulezayo kwi-Intanethi ihlaziya rhoqo icandelo ngoomatshini ekufakwa. Ke ngoko, abasebenzisi benkqubo banokuqiniseka ukuba baya kuba ngabokuqala ukufikelela kwiimveliso ezintsha kwihlabathi lokungcakaza.
Ukuba oomatshini ekufakwa abatsali ingqalelo yomsebenzisi, unokuzama isandla sakhe kwamanye amacandelo enkampani, angala:
kwimidlalo nabathengisi abaphilayo. Nazi iindlela ezikhoyo zeroulette, i-blackjack, i-keno kunye nezinye iindlela, apho lonke unxibelelwano lwenzeka phakathi komngcakazi kunye nombonisi. Kuya kufuneka azise abathathi-nxaxheba malunga nemigaqo yomdlalo kwaye enze konke okufunekayo ukuze babheje.
roulette. Iindidi ezininzi ziyafumaneka, kubandakanya isiFrentshi kunye neMelika. Imigaqo icacile ngokucacileyo kuye nakubani na okhe watyelela ikhasino okanye wabukela iifilimu ezinxulumene nokusebenza kwamaziko anjalo.
Inani lezinto ezibonelelwa yinkampani ziyanda rhoqo, ngaloo ndlela zivuselela abaphulaphuli ekujoliswe kubo ukuba benze iakhawunti kwinkqubo.
Phantse konke ukusebenza kwekhasino ekwi-intanethi ivaliwe kumsebenzisi kude kube ngumzuzu wokudala iakhawunti. Ialgorithm yezenzo imi ngolu hlobo lulandelayo:
Yiya kwiwebhusayithi esemthethweni ye-Fastpay. Kwamanye amazwe, unokufuna isipili esisebenzayo, esinokufumaneka kwinkxaso okanye kumaqabane enkampani.
Khetha icandelo lobhaliso. Ime kwikona ephezulu ngasekunene.
Gcwalisa onke amacandelo efom yesicelo-inombolo yefowuni, i-imeyile, iphasiwedi oyifunayo kunye nemali yeakhawunti. Ukongeza, unokuvuma ukuthatha inxaxheba kwinkqubo yokunyaniseka kwaye uqinisekise ukuqhelaniswa nemithetho yenkampani.
Qinisekisa ubhaliso nge-imeyile.
Umthengi oqhelekileyo we-Fastpay, onke amanqanaba awathathi ngaphezulu kwemizuzu emi-5-6. Kwixesha elizayo, unokufumana isicelo sokuqinisekiswa ngokuthumela iifoto zamaxwebhu akho. Nangona kunjalo, le nkqubo ivumela abadlali ukuba babhejele ngaphandle kwesiqinisekiso.
Into ebalulekileyo nakweyiphi na ikhasino ekwi-Intanethi kukukwazi ukufaka kunye nokukhupha imali kwelona nani likhulu linokubakho. Iqonga le-Fastpay lixhasa ukuzaliswa kwakhona ngamakhadi ebhanki (Mastercard, VISA, Maestro), ii-e-wallets (EcoPayz, Neteller, Skrill, NiFinity, Rapid, EcoVoucher, Neosurf, WebMoney), kunye nokusebenzisa iiasethi zedijithali (iBitcoin, i-Ethereum, iLitecoin, Dogecoin, iTether). Iakhawunti igcwaliswa kwangoko, kwaye ungasebenzisa i-EUR, USD, CAD, AUD, NZD, NOK, PLN, JPY, ZAR, UAH, RUB, BTC, ETH, BCH, LTC, DOGE, USDT njengemali.
Iindlela ezifanayo ziyafumaneka zokurhoxisa imali. Umahluko kuphela ubandakanya ixesha lokulinda. Kwiimeko ezininzi, umdlali kufuneka alinde iiyure ezininzi, kwaye kwimeko yeengxaki, nxibelelana nenkonzo yenkxaso.
Umsebenzisi ngamnye ovumileyo ukuthatha inxaxheba kwinkqubo yokunyaniseka ufumana ukufikelela kwizibonelelo zentengiso zekhasino ezikwi-Intanethi ezikwi-Intanethi. Kakade ngaphambi kokubhalisa, unokufumana ikhowudi yokwazisa, efumene amalungelo emva kokudala iakhawunti.
Iphakheji yokwamkela yahlulwe phakathi kweedipozithi ezimbini zokuqala. Njengenxalenye yedipozithi yokuqala, umsebenzisi ufumana ukuya kuthi ga kwi-100 EUR, i-100 yeedola, i-150 CAD, i-150 AUD, i-150 NZD, i-1000 NOK, i-450 PLN, i-12,000 JPY, i-1600 ZAR, i-0.01 BTC, i-0.25 ETH, i-0.5 BCH, i-1.9 LTC , I-44,000 DOGE, i-117 USDT eza kubhejwa nge-x50 wager. Kwibhonasi yedipozithi yesibini, isixa esiphezulu sincitshisiwe, esifikelela kwi-50 EUR, 50 USD, 75 CAD, 75 AUD, 75 NZD, 500 NOK, 225 PLN, 6000 JPY, 800 ZAR, 0.005 BTC, 0.125 ETH, 0.24 BCH, 0.95 LTC, 22,000 DOGE, 58.5 USDT. Imithetho yokubheja ihlala ifana kwinqanaba lokuqala.
Uncedo lwebhonasi yokubhalisa yekhasino ye-Fastpay kukuba inkampani ayikhawuleli abasebenzisi kwisixa semali ephezulu. Iimali zebhonasi zisebenza inyanga. Ngenxa yoko, umdlali unexesha lokukhetha oomatshini abafanelekileyo bemidlalo. Ukongeza, umdlali ufumana i-100 yasimahla yokujikeleza, i-20 nganye yeentsuku ezintlanu zokuqala zokusebenzisa isibonelelo esamkelekileyo.
Inkqubo eyahlukeneyo yebhonasi yenye yeempawu zesiza. Kwixesha elizayo, abasebenzisi abasebenzayo baya kuba nakho ukufumana ikhowudi yonyuselo yokujikeleza simahla ukuphinda uzalise imali kunye nokujikeleza iirili. Amaxesha aliqela ngeveki, idiphozithi kwaye akukho kukhushulwa kwedipozithi kuya kusebenza, kukuvumela ukuba wandise ibhanki yakho ngaphandle komngcipheko wokuphulukana nemali.
Abasebenzisi benkqubo baya kuba nakho ukuthatha inxaxheba kwiitumente eziququzelelwe yinkampani. Batsala umdla nge-pool yebhaso elungileyo kunye nenani labaphumeleleyo bokugqibela.
Ngokubanzi, inkqubo yokunyaniseka yahlulwe yangamanqanaba ali-10. Ukufikelela kwinqanaba ngalinye, umthengi weofisi ufumana ibhonasi ethile. Ukuphakama kwenqanaba, kokukhona inkampani inikezela ngesisa.